Hay’adaha amniga DF oo lala xisaabtamayo – XAMAR POST
Hay’adaha amniga DF oo lala xisaabtamayo
Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay si adag ula xisaabtamayaan Hay’adaha ammaanka ee Dowladda.
Guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in ay muhiim tahay in la xoojiyo wada shaqeynta Hay’addaha ammaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed, iyada oo xubnaha Guddiga ay bogaadiyeen shaqada ay wadaan Ciidamada Booliska iyo Nabad sugidda Soomaaliya.
Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed oo Xubin ka ah Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Hay’addaha ammaanka looga baahan yahay in ay tixgeliyaan shacabka islamarkaana ay si wanaagsan ula dhaqmaan.
Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sidoo kale tilmaamay in Hay’addaha ammaanka loogu baahan yahay in ay ilaaliyaan hantida iyo masuuliyada lagu aaminay.
“Xildhibaan ahaan Saddex masuuliyad ayaa na saaran oo kala ah inaan matalno shacabka, inaan la xisaabtano Hay’adaha fulinta iyo inaan sharci dejintii aan nahay, sidaasi darteed waa inaan ka wada shaqeynaa sidii shacabka iyo Hay’adaha ay u wada shaqeyn lahaayeen.” Ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq Cumar.
Diyaaradii qaadka geyn jirtay Jowhar oo la Joojiyay & Sababta oo la ogaaday